China epurasitiki zvikamu zvemumvuri mwenje Mugadziri uye mutengesi | Mestech
Zvikamu zvepurasitiki zvemwenje usina mumvuri vari kazhinji kuitwa jekiseni Kuumbwa.
Zvikamu zvepurasitiki zvemwenje isina mumvuri zvinowanzo gadzirwa nejekiseni kuumbwa. Rambi risina mumvuri inzvimbo hombe yechiedza nekurongedza rambi riine kupenya kwakasimba pane disc rambi kuita denderedzwa. Nenzira iyi, mwenje unogona kuvhenekerwa tafura yekushanda kana kushandisika kubva kumativi akasiyana, izvo zvinoona kuti munda wekuona une kupenya kwakaringana uye hauburitse pachena mumvuri, saka unonzi mwenje usina mumvuri.
Mwenje usina mumvuri unonyanya kushandiswa kujekesa tafura yekushanda muchipatara, inoenderana nehupenyu hwemurwere. Inoda kujekesa yunifomu uye hapana mimvuri.
Ukuru hwemwenje husina mumvuri hwakakura, hukuru hwakasiyana hwemaburi emarambi mundiro yemwenje zvinoenderana nemimwe mitemo. Kuti uwane yunifomu yekuvhenekesa mhedzisiro, gomba rega rega rine chinzvimbo chakakwirira uye saizi kunyatso kudikanwa. Shadowless mwenje ganda uye mwenje mumvuri zvakagadzirwa zvepurasitiki zvinhu nejekiseni kuumbwa.
Marambi asina mimvuri
1.Purasitiki furemu yemumvuri usina rambi
Kune akawanda matenderedzwa emwenje maburi akarongedzwa mu TOUR mutsetse nepakati dhisiki sepakati peiyo isina mumvuri rambi disc. Makomba aya akatwasanuka kubva pakati kusvika kune dhayamita yekunze kubva padiki kusvika kune hombe, izvo zvinova nechokwadi chekufanana kwesimba rechiedza richipfuura nemu disc rose remwenje. Naizvozvo, zvinodikanwa kuti uve nechokwadi chedaro pakati pemakomba ari padyo uye neyakaenzana makomba.
Chinhu: ABS, grey, ine anti ultraviolet kukwegura inowedzera.
B pamusoro: tsanga yakanaka
C muforoma: matatu ndiro muforoma inopisa mumhanyi, poindi gedhi
2. Chivharo chisina kujeka chemwenje usina mumvuri
Transparent mwenje wakagadzirwa neyakanyanya kujekesa acrylic zvinhu nejekiseni kuumbwa. Zvikamu zvinodikanwa kuti zvive nemwenje wakanaka kutapurirana, uye mukati mayo nekunze hazvibvumidzwe kuve nemavara, matema, fusion mitsara uye mitsara yemhepo.
Chinhu: PMMA, isina ruvara uye yakajeka.
B pamusoro: specular
C mold: matatu ndiro muforoma inopisa mumhanyi
MESTECH inogadzira mwenje isina mumvuri inogadzira jekiseni mafomu uye zvikamu. Kana iwe uchida epurasitiki zvikamu vagadziri kuti vagadzire mumvuri-mashoma marambi, ndapota taura nesu.
Pashure: Double jekiseni Kuumbwa
Zvadaro: Plastic zvokurapa bhokisi jekiseni Kuumbwa